Weerar Dhimasho sababay oo ka dhacday Boosaaso – Radio Baidoa
Weerar Dhimasho sababay oo ka dhacday Boosaaso
Wararka Idaacadda Risaala ay ka heleyso Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari ayaa waxaa ay sheegayaan in halkaasi uu ka dhacay weerar lagu diley hal Ruux laba kalena lagu dhaawacey.
Rag hubeysan ayaa la sheegay inay rasaas ku fureen Goob ay ku sugnaayeen dad farabadan,waxaana rasaastaas ku geeriyoodey Nin ka tirsanaa Shaqaalaha Wasaaradda Maaliyadda Puntland oo Magaciisa lagu sheegay Garaad Suleymaan Ahmed Shire halka ay ku dhaawacmeen askari ka tirsan ciidamada Puntland iyo qof Shacab ah.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in ragga ka dambeeyey weerarka sababay dhimashada iyo dhaawaca ay durba goobta ka baxsadeen,waxaana halkaasi baaritaano ka wada Ciidamo ka tirsan Booliska Soomaaliya.
Majirt cid weli sheegatay mas’uuliyadda weerarkaas,hayeeshee bilihii la soo dhaafay waxaa faraha ka baxey Ammaanka Magaalada Boosaaso,iyada o ay ka dhaceen weeraro ay mas’uuliyadooda sheegteen Al-Shabaab iyo Kooxda Daacish-ta Soomaaliya.
Soomaaliland oo hakisey duulimaadyada uga yimaada Muqdisho
Maamulka G/Banaadir oo bilaabey qorsho looga hortagayo Coronavirus